भारत-चीन टकरावले ल्यायो तरंग, नेपालमा कस्तो असर पर्ला – Himshikharnews.com
भारत-चीन टकरावले ल्यायो तरंग, नेपालमा कस्तो असर पर्ला
समाचार विश्लेषण । भारत र चीनबीच टकराव बढेको छ । सोमबार सिमामा २० जना सैनिक गुमाएको भारत यसबारे गम्भीर भएको छ । चीनले पनि क्षति भोगेको छ तर खुलाएको छ ।
भारत-चीन विवादमा अमेरिकी चासो खुल्दै गएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले भारत र चीनबीचको सिमा विवादमा मध्यस्थकर्ताको भुमिका निभाउने चाहना व्यक्त गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो चाहना व्यक्त गरेपनि भारत र चीन दुवैले अस्वीकार गरे । तर, विश्व नै कोरोना महामारीमा केन्द्रित हुँदा भारत चीनबीच युद्धको कालो बादल मडारिनुलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छ ।
चीनले भारतको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो गतिविधिमा अमेरिकी भुमिका देखेको छ । चिनियाँ विदेश मामलाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने ग्लोबल टाइम्सले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्र्तगत अमेरिकी गतिविधि बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । सिमामा भारत सक्रिय हुनुमा यही रणनीतिलाई पनि कारण देखाएको छ । चीनियाँ पत्रिकाले भारतले आफ्नो सैन्य क्षमता चीनको भन्दा बढी रहेको देख्न थालेर भुल गरेको टिप्पणी गरेको छ । यसलाई घुमाउरो तरिकाले ‘अमेरिकी उक्साहट’ भनेको छ ।
भारत र चीन छिमेकी देश भएपनि सम्बन्ध त्यति सहज छैन । दुई देशले विगतमा युद्ध समेत गरिसकेको इतिहास छ । सिमा अतिक्रमणको आरोप एक अर्कामाथि लगाइरहेका छन् । सिक्किम देखि लदाखसम्म विवाद छ । बेला बेलामा झडप भइरहन्छ । दुवै देशले सिमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएका छन् । यसले पनि विवाद बढाएको छ ।
चीनले भारतमाथि इन्डो प्यासिफिकमा सामेल भएर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ । भारतले चीनको वरिपरि रहेको भियतनाम, ताइवानलगायतका देशसँग सम्बन्ध बढाएर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको चीनको बुझाई छ । साउथ चाइना सीका टापुको विवादका कारण चीनका छिमेकी देशहरु भियतनाम, जापान, फिलिपिन्सलगायत चिढिएका छन् । यसको लाभ उठाउन भारत सक्रिय भएको देखिएको छ ।
चीनले पनि भारतको छिमेकी देशहरुमा चासो बढाएको छ । उसले बीआरआईमार्फत् लगानी र चासो बढाएको हो । पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिभ्समा मात्र नभई नेपालमा पनि चासो बढाएर भारतलाई चुनौती दिइरहेको छ । पछिल्लोपटक नेपालले भारतसँग सिमा विवादबारे जसरी कदम चाल्यो त्यसलाई दिल्लीले चीनको भुमिकाले काम गरेको बुझेको छ । भारतीय सेनापति एम एम नरवाणेले नेपालले लिपुलेक लिंकरोडमा जनाएको आपत्तिलाई कसैको उक्साहट भनी चीनतर्फ संकेत गरे । कतिपय भारतीय विज्ञहरुले सिधै चीनको नाम लिन थालेका छन् ।
चीनको चासो जसरी बढेको छ त्यसरी नै नेपालमा अमेरिकी चासो बढेको छ । अमेरिकी विकाससम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालमा बहसको विषय बनेको छ । संसदमा १५ असारभित्र पारित गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद चलेको छ । यो विवादलाई मात्र एमसीसी र अमेरिकासँग नजोडी नेपालमा चीनको चासोसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । नेकपा नेताहरुले यसलाई सैन्य रणनीतिसँग जोडेर हेरेका छन् । चीनले एमसीसी जस्ता अमेरिकी योजनाहरुलाई मन पराएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अमेरिकी प्रभावबारे शतर्कता देखाइरहेको चीनले कस्तो भुमिका खेल्ला ? यो चासोको विषय छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको साथ पाउँदै आएको खुल्दै गएको छ । उनको सत्ता धरमराउँदा चीनको साथले जोगिएको चर्चा नचलेको होइन । चिनियाँ राजदुतको नेताहरुको घर घरमा दौडधुपले धेरै वास्तविकता सतहमा ल्याइदियो । एमसीसी पारित गरेर के ओलीले चीनलाई चिढ्याउलान् ?
यद्यपि, उनी एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । एकातर्फ चीनलाई नचिढ्याउने र अर्कोतर्फ विश्व राजनीतिमा तिव्र ध्रुवीकरण बढिरहेको, भारत र चीनबीच टकराव बढ्दै गएको र अमेरिकी रणनीतिक चासो सँसारभर देखिदै गएको अवस्थामा ओलीले कसरी कुटनीतिक चार्तुयता प्रस्तुत गर्लान् ? यो अहं प्रश्न बनेको छ ।
यसै पनि नेपाल चीन र भारत जस्ता बलिया र ठुला देशको बीचमा रहेको छ । विश्व महामारीबीच ठुला देशको टकरावको अवस्थामा साना देशका लागि सुरक्षा चुनौती उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । यसलाई सामना गर्ने खुबी ओलीले कसरी गर्लान् ? यो अहं प्रश्न हो ।रिपोर्टर्स नेपाल डट कम बाट साभार